युवा कमेडी "द प्रशंसक नास्ता लागि रहन छैन।" जवान मानिसहरू मूर्तिहरू बनेका छन् जो अभिनेता
Melodramatic कमेडी "द प्रशंसक नास्ता लागि रहन छैन" (अभिनेता: ए फिशर र K. Ullman) - मूर्तिहरू र प्रशंसक, एक जर्मन निर्माता-निर्देशक मार्क Rothemund स्टाउट र टाढा तुच्छ फिलिम देखि कौशलतासाथ बरु तुच्छ र चिल्लो लागेको मिडिया विषय मा नाटकीय एपिसोड संग उच्चारणगरिएकोअक्षरटाइपगर्नुहोस् छ। यस समय देख पहिलो मिनेट देखि देखिन्छ कि तस्वीर, सजिलो रोचक, स्पष्ट, सामान्य हँसिलो, पनि एक सानो virtuous हुनेछ स्थिर विश्वास - र यो धेरै अन्त सम्म दर्शक भावना छोड्न छैन।
मुख्य चरित्र, सत्र Lila (होनहार अभिनेत्री र एक राम्री केटी अन्ना फिशर) एक विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम मा अमेरिकामा एक वर्षको लागि बस्थे। घर फर्केपछि त्यो समाज र परिवारमा निरन्तर परिवर्तन गर्न अनुकूल गर्न खोज्छ। यो अवधिमा, जर्मनी जहाँ एक soloist एक शानदार मान्छे Critz (विशिष्ट जर्मन kostya उपस्थिति Ullman संग सभ्य जवान अभिनेता) छ लोकप्रिय युवा समूह बर्लिन Mitte, भयो। सबै केटीहरू-किशोरीहरूको जस्तै-दिमाग गायक नजिकका हेर्छ संगै जो, मन, एक अपवाद र प्रिय बहिनी Lila, र प्रदर्शन ठाउँ यसलाई माध्यम जानुहोस्। Fanatical उत्साह थाह कुनै सीमा, बालिका एक devilish कौशल देखाउन र केवल आफ्नो मूर्ति पूरा गर्न कुनै पनि चाल जाने। तर भाग्य हृदय र जवान प्रतिभा को प्राण जसले प्रेम को समय मा र उनको अगाडि छ जो बारेमा कुनै विचार थियो Lila, चोरेछ भनेर, यो हुनेछ। कमेडी "द प्रशंसक, नास्ता लागि रहन छैन" तुरुन्तै पछि फिलिमहरु उपासना प्रेरित दर्शक, एकदम व्यावहारिक वस्तु बनेका छन् कि अभिनेता।
फिल्म को निर्माताहरू को merits एक brilliantly डाली कास्टिंग मेल खाने छ। यो जर्मन सिनेमा भित्री करिश्मा को जवान तारा धन्यवाद चलचित्र मा महसुस छ। सबै माध्यमिक वर्ण सहित रोमान्टिक घटक संग मिलेर राम्रो आकर्षण र परियोजना को आकर्षण दिन्छ जो, हास्यास्पद वा टाढा, देखिने डर छैन, धेरै भवदीय हेर्न "द प्रशंसक नास्ता लागि रहन छैन।" जो मुख्य वर्ण प्ले अभिनेता, पूर्ण साना अनुभव बाबजुद, तिनीहरूलाई अगाडि कार्य सामना। तिनीहरूले फिलिम को रील व्यावहारिक र सान्दर्भिक प्राप्त गर्न त पूरै निर्देशक को दर्शक गरेको विचार गर्न, जानकारी छन्। अन्ना फिशर, यद्यपि बाहिरबाट घातक छैन सौन्दर्य, तर एक आकर्षक अभिनेत्री छ। यसको फाइदा अतुलनीय करिश्मा छ। Kostya Ullmann पनि आदर भुक्तानी गर्न लायक छ, त्यो उनको naturalness र आकर्षण कल्पनासमेत नगरेको खींच खेल्छ ईमानदारी। सबै एउटै मान्छे गर्न भव्य गाउँछन्।
अर्को Cinderella कथा
"को प्रशंसक नास्ता लागि रहन छैन" फिल्म यसको Lightness, आशावाद र रोमान्स संग प्रस्ट हुन्छ। प्लट कभी-लोकप्रिय "Cinderella कथा" मा आधारित छ, तर यो फिलिम परियोजना मुख्य पात्र मात्र एक राजकुमार संग प्रेम पर्नु छैन, तर यो सबै समस्याहरूको र बाबजुद को कठिनाइ राख्न सक्षम थियो। परिदृश्य चित्र, द्वारा र ठूलो, साधारण मान्छे को जीवन को साधारण दैनिक परिस्थिति वर्णन गर्दछ। सामान्य मा, दृश्य को तारा - एउटै मान्छे, आफ्नो आकांक्षाओं, चाहना र भावना संग। तिनीहरूले, अरू सबैलाई जस्तै, आफ्नो भावना माथि कुनै नियन्त्रण र कसलाई र प्रेम पर्नु कहिले गर्न छनौट छैन।
फिल्म "द प्रशंसक, नास्ता लागि रहन छैन" अभिनेताहरु गर्ने, वास्तव मा, अझै पनि एकदम छोराछोरी, दुरुपयोग, हिंसा र vulgarity कुनै दृश्य, यो सुरक्षित परिवार अवलोकनका लागि सिफारिश गर्न सकिन्छ त। सबै घटक यो छ: लगभग सबै एपिसोड, सभ्य अभिनय को रोमाञ्चकारी कथा रोचक, उच्च गुणस्तरीय उत्पादन। सबै माथि बाहेक, मार्क Rothemund सिर्जना त्यहाँ आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरणा र इच्छा प्रोत्साहन राम्रो हास्य र स्थापना को एक निष्पक्ष शेयर छ। फिल्म, बिना सामाजिक स्थिति, पूर्वाग्रह, दूरी र अन्य अवरोध प्रेम लागि लड्न सिकाउँछ।
फिल्म संगीत पनि महत्वपूर्ण भूमिका, अझै पनि युवा संगीत समूह को तस्वीर खेल्छ। सिनेमा धेरै बलियो र प्रभावशाली saundlist छ। समकालीन सांगीतिक रुझान को विविधता सबै समर्पित लगभग तुरुन्तै बर्लिन Mitte एक चलचित्र दुनिया-प्रसिद्ध ग्रीन दिन अन्तर्गत "zakosom" छ कि स्पष्ट हुन्छ। र संरचना एक soloist र एक वास्तविक पप मूर्ति रूपमा अप गरे, समान मनसाय छ executes। छाप मिश्रित मात्र फ्रैंक Ziegler, परियोजना सिनेमा मा debut थियो जसको लागि पूर्व नेतृत्व को «Panik» गायक छ। उहाँले पनि हुनत एक असामान्य विधामा, राम्रो darn राम्रो गाउँछन्, तर अभिनय कौशल काम गर्न लायक हुनेछ। सबैभन्दा स्मरणीय ट्रयाक सकिन्छ «Nicht Ohne अनुवाद», Lila Critz गाए जो। आनन्दित प्रेमीहरूको को अन्त मा एक युगल गीत क्रिस नर्मन «हाम्रो प्रेम जीवित छ र त हामी सुरु» गाउन। यसलाई बन्द जर्मन डिस्को 80s को प्रशंसक, एक अद्भुत गीत हो। किशोर पप मूर्ति - र मुख्य चरित्र उनको प्रेमी भन्दा उनको राम्रो लाग्छ।
गाउँमा बारेमा फिलिम: प्राणको कुख्यात रूसी कूचो लगाउनु
Cameo - यो के हो? चलचित्र प्रसिद्ध व्यक्ति एक बिट भाग: उदाहरणहरू
अन्ना मैक्सवेल मार्टिन। बेलायत बाट अभिनेत्री
तिनीहरूले प्ले कि अभिनेता र भूमिकाको: फिल्म "राजकुमार आकर्षक"
कमेडी "सुन्दर महिलाहरु लागि!": अभिनेता र भूमिकाको
Pokki - यो के हो?
भाषा पट्टी कसरी पुनर्स्थापना
तपाईंको डेस्क सधैं एक उत्सव मुड - रक्सी "नूह"
औषधि "Erespal" (सिरप): प्रयोगको लागि निर्देशन। संक्रामक श्वसन रोगहरु बारम्बार एपिसोड बच्चाहरु को लागि
खनिज पानी मा ravioli लागि लोचदार आटा: एक नुस्खा
कम्प्युटर नेटवर्क के हो
अनुहार लागि कंसीलर। ठूलो प्रभाव सानो सहायक।
विवरण, प्रकृति, यात्राको: को बेलग्रेड क्षेत्रमा lotuses को ताल
ग्यास मास्क फिल्टर लागि: वर्गीकरण, पद, अंकन, भण्डारण समय। उपकरण मास्क
देश मा slabs फर्श ट्रयाक: सामाग्री को विकल्प, स्टाइल